Tips – FemaleWear.net
ဆောင်းရာသီရဲ့ သင်္ကေတတစ်ခုဖြစ်တဲ့ တဘက်ပုဝါလေးများ
တဘက်ပုဝါ တွေက ဆောင်းရာသီအတွက် မရှိမဖြစ်တဲ့ ပစ္စည်းတစ်ခုပါ။ အမျိုးသားတွေရော၊ အမျိုးသမီးတွေအတွက်ပါ လိုအပ်ပါတယ်။ တဘက်ပုဝါကို အများဆုံး ကြိုက်နှစ်သက်ကြတာက အမျိုးသမီးတွေပါ။ အထူးသဖြင့် ဒီဇင်ဘာနဲ့ ဇန်နဝါရီလမှာ အအေးဓါတ်ပြင်းထန်တာကြောင့် နွေးထွေးမှု ရစေတဲ့တဘက်ပုဝါလေးတွေနဲ့ ဆန်းသစ်စေချင်ပါတယ်။ လည်ပင်းတဝိုက်ကို နွေးထွေးစေပြီး တဘက်ပုဝါလေးတွေက အနွေးဓါတ်တွေပေးတဲ့အပြင် ဆောင်းရာသီမှာ ပျိုမေတို့ကို စတိုင်ကျနေစေမှာပါ။ ဒီတဘက်ပုဝါတွေကို စတိုင်ကျကျ ဘယ်လို တွဲဖက်ဝတ်ဆင်သင့်တယ်ဆိုတာကိုတော့…
ဗီရိုထဲက အဝတ်အစားတွေ အကုန်လုံးဝတ်ဖြစ်ရဲ့လား?
ပျိုမေတို့ရေ ဗီရိုထဲက အဝတ်အစားတွေ အကုန်လုံးမဝတ်ဖြစ်ဘူးမို့လား? အဆင်ပြေရာလေးတွေပဲ ခဏခဏ ဝတ်မိနေတယ်လေ။ ဒါဟာ ဘာနဲ့ တူလဲဆိုတော့ အစားရှောင်နေတဲ့ ကောင်မလေးတွေလိုပေါ့နော်။ အပြင်ထွက်တဲ့အခါ အဝတ်အစားလှလှလေးတွေ တွေ့ရင် ဝယ်လိုက်တယ်။ ပြီးတော့ ဗီရိုထဲ ထည့်ထားလိုက်တယ်။ တစ်ခါ ဝတ်ကြည့်တယ်။ အဆင်မပြေတော့ မဝတ်ဖြစ်တော့ဘူးလေ။ ဒါဆို ပိုက်ဆံတွေ အပိုကုန်တာပဲပေါ့။ မနက်ခင်းအပြင်ထွက်တဲ့အခါ…
အားလပ်ရက်ခရီးတွေမှာ ဖက်ရှင်ကျကျ ဝတ်ဆင်နိုင်ဖို့
သီတင်းကျွတ်ကာလရောက်လာပြီဆိုတော့ အားလပ်ရက်တွေ များလာပြီလေ။ သီတင်းကျွတ်မှာလည်း အားလပ်ရက်တွေ များသလို၊ တန်ဆောင်မုန်းနဲ့ ဒီဇင်ဘာလတွေမှာလည်း ပိတ်ရက်တွေ များပါတယ်။ ဒီလို ပိတ်ရက်လေးမှာ ခရီးရှည် ဒါမှမဟုတ် ခရီးတို ထွက်ဖို့ ပြင်ဆင်ကြပြီဆိုရင် သွားမယ့် ဒေသကို လိုက်ပြီး အဝတ်အစားတွေ ခရီးဆောင်အိတ်ထဲ ရွေးချယ်ထည့်ရတော့မှာပါ။ ဒီရာသီတွေက မိုးအကုန်နဲ့…
သီတင်းကျွတ်မှာ ဖွားဖွား၊မေမေ၊ဒေါ်ဒေါ်၊ မမ တို့ကို လက်ကိုင်အိတ်ကောင်းကောင်းနဲ့ ကန်တော့ကြမယ်
သီတင်းကျွတ်မှာ ပျိုမေတို့အနေနဲ့ မေမေ၊ ဒေါ်ဒေါ်၊ မမ တို့ကို ကန်တော့ဖို့အစီအစဉ်ရှိတယ်ဆိုရင် သာမန်ကန်တော့နေကျ ပစ္စည်းတွေအစား လက်ကိုင်အိတ်ကောင်းကောင်းတစ်လုံးကို ရွေးချယ်ကန်တော့ဖို့ အကြံပေးချင်ပါတယ်။ ဘာကြောင့် လက်ကိုင်အိတ်ကောင်းကောင်းတစ်လုံးကို ရွေးချယ်ကန်တော့သင့်တာလဲ? လက်ကိုင်အိတ်ဆိုတာ အမျိုးသမီးတွေအတွက် မရှိမဖြစ်တဲ့ ပစ္စည်းတစ်ခုပါ။ အမြဲတမ်းအသုံးဝင်နေတဲ့ ပစ္စည်းတစ်ခုလို့လည်း သတ်မှတ်လို့ရပါတယ်။ ကန်တော့ဖို့အတွက် လက်ကိုင်အိတ်ကောင်းကောင်းတစ်လုံးကို ဘယ်လိုရွေးချယ်ကြမလဲဆိုတာ ပြောပြပေးမယ်နော်။ ၁။ အသက်အရွယ် ပထမဆုံး…
မကြာခင် မင်္ဂလာပွဲဆင်နွှဲတော့မယ်ဆိုရင်တော့ဒါလေးကို ဖတ်ဖို့လိုနေပြီနော်
ကဲ ဝါတွေလည်းကျွတ်တော့မယ် နှစ်ယောက်တစ်အိပ်မက်တွေလည်း ဖြစ်ကြတော့မယ်ဆိုတော့ ? မင်မင်ကဒီနေ့မှာတော့ ဝါကျွတ်ရင် မင်္ဂလာပွဲဆင်နွှဲတော့မယ့် အချစ်တို့အတွက် ကူပြီးစဉ်းစားပေးမှာ. ပြီးတော့ တွေးရင်းရွေးရင်းနဲ့ခေါင်းရှုပ်နေတဲ့ သတို့သမီးလေးတွေအတွက်လည်း အကြံဉာဏ်ကောင်းလေးတွေပေးမလို့ စိတ်ဝင်စားကြလား? မင်္ဂလာပွဲတစ်ပွဲကျင်းပရတယ်ဆိုတော အပြောကသာလွယ်တာ။ တစ်ကယ်တမ်းလက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်ကြည့်လိုက်ရင် တကယ့်ကိုမလွယ်ကူတဲ့ အရာကြီးတစ်ခုပါ။ မင်္ဂလာဝတ်စုံရွေးရတာနဲ့, ခန်းမကြည့်ရတာနဲ့, ဖိတ်စာတွေလိုက်ဖိတ်ရတာနဲ့, ဓါတ်ပုံတွေလှအောင်ရိုက်ရတာနဲ့ဖတ်ဖတ်ကို မောနေတာပဲ။ တကယ့်ကို စိတ်လည်းမောလူလည်းမောဖြစ်ရတာပေါ့။…
ပျိုမေတို့အတွက် Sneaker ကောင်းကောင်းလေးတစ်ရံကို ဘယ်လိုရွေးချယ်ကြမလဲ
ခြေလှမ်းလေးတွေကိုအလှပဆုံး လျှောက်လှမ်းနိုင်စေတာ ကောင်းမွန်တဲ့ဖိနပ်တစ်ရံကြောင့်ဆိုတာ ပြောဖို့တောင်လိုမယ်မထင်ပါဘူးနော်။ ဖိနပ်ကောင်းကောင်းတစ်ရံဟာကောင်းတဲ့နေရာတွေကို ခေါ်သွားတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းတစ်ချို့တွေက ပြောကြသေးတယ်နော်။ ကောင်းတဲ့နေရာခေါ်သွားဖို့မဟုတ်လည်း ဖိနပ်ကောင်းကောင်းတစ်ရံကတော့လူတိုင်းလူတိုင်းမှာလိုအပ်ပါတယ်နော်။ အသဲတို့လိုမိန်းကလေးတွေကတော့ပိုဆိုးတာပေါ့။ တစ်ရံတောင်မဟုတ်ဘူး။ အများကြီးရှိနေမှာသိနေတယ်လေ။ အဲ့လိုဖိနပ်တွေထဲကမှ ဝတ်ရတာပေါ့ပါးလွတ်လပ်တဲ့အပြင် မကြိုက်တဲ့သူသိပ်မရှိလောက်တဲ့ ဖိနပ်အမျိုးစားလေးတစ်ခုရှိပါတယ်။ အဲ့ဒါလေးကတော့ Sneakers လေးတွေပါ။ Sneakers လေးတွေက ရုတ်တရက်ကြည့်လိုက်ရင်တော့ယောက်ျားဆန်ပေမယ့် မိန်းကလေးဆန်ဆန်ဒီဇိုင်းလေးတွေလည်းရှိပါတယ်။ ဒါကတော့ကိုယ်ရွေးချယ်လိုက်တဲ့ဒီဇိုင်းပေါ်ပဲမူတည်တာပါနော်။ စိတ်မပူပါနဲ့မင်မင်ကဒီနေ့…
ပေါင်တံတွေကြီးနေတဲ့အချစ်တို့အတွက် ရွေးချယ်ရမယ့် ဖက်ရှင်စတိုင်လ်လေးတွေ
မိန်းကလေးတွေအတွက် ဖက်ရှင်ဆိုတာ အရမ်းအရေးပါတဲ့ကဏ္ဍကနေပါဝင်နေပါတယ်။ မိတ်ကပ်တွေမပြင်ဆင်ထားရင်တောင်နေ့စဉ်နဲ့အမျှဖက်ရှင်ကိုတော့သေချာလေးဂရုစိုက်နေရတယ်ဆိုတာ မိန်းကလေးတိုင်းသိကြပါတယ်နော်။ ဖက်ရှင်ဆိုတာကလည်း စကားလုံးလေးနှစ်လုံးပေမယ့် တကယ့်ကိုအရေးပါသားနော်။ ဖက်ရှင်မှာမှ ပိန်တာဝတာတွေပေါ်လိုက်ပြီးတော့ ရွေးချယ်ရသေးတယ်။ ဒီနေမင်မင်က အဲ့လိုရွေးချယ်ရတဲ့ဖက်ရှင်တွေထဲကမှ ပေါင်တွေကြီးပြီးတော့ ဘောင်းဘီဝတ်ရင်အဆင်ပြေမလား? စကတ်ဝတ်ရင်ကြည့်ကောင်းမလား စဉ်းစားရကြပ်နေတဲ့အချစ်တို့အတွက် တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ ပေါင်တွေကြီးနေတာကို သိပ်ဂရုမစိုက်တဲ့သူတွေကတော့ ဘာမှပြဿနာမဖြစ်ပမယ့် အဲ့ဒါကိုပဲဂရုစိုက်ပြီးစိတ်ပျက်နေတဲ့သူတွေကတော့တော်တော်ဒုက္ခရာက်မယ်ဆိုတာ သိနေပါတယ်နော်။ အဝတ်အစားဝယ်တဲ့အခါ ကြုံတွေ့ရတဲ့ခံစားချက်ကို…
မိန်းကလေးဆန်ဆန်ဝတ်စားဆင်ယင်တတ်ဖို့ကလည်းတကယ့်ကိုအရေးကြီးပါတယ်။ ပေါ့ပေါ့းပါးပါး free style လေးတွေကလည်းကောင်းပေမယ့်အမြဲတမ်းကြီးတော့ အဆင်မပြေပါဘူးနော်။ မိန်းကလေးလိုလေးလည်းဝတ်ဉီးမှ မဟုတ်ရင် ယောက်ျားစိတ်ပါဝင်သွားလိမ့်မယ်? ဒီတော့မင်မင်က အချစ်တို့အတွက်မိန်းကလေးဆန်တဲ့အင်္ကျီလေးတွေကို တင်ဆက်ပေးမှာမို့လိုက်ကြည့်ပေးပါဉီးနော်။ ဆယ်ကျော်သက် နှစ်ဆယ်ကျော်ကောင်မလေးတွေအတွက်ရည်ရွယ်တာမို့ သဘောကျနှစ်ခြိုက်ကျမယ်လို့လည်း မျှော်လင့်ပါတယ်နော်။ ချစ်စရာမကောင်းဘူးလား ဖက်ရှင်လေးတွေက။ ဝတ်ဆင်ပုံလေးကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့မိန်းကလေးဆန်မှန်းသိသာစေတဲ့စတိုင်လ်လေးတွေပါ။ အရောင်နုလေးတွေက မိန်းကလေးဆန်စေပြီးတော့ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ဘက်ကိုသွားပါတယ်။ ဂါဝန်လေးတွေ. စကတ်လေးတွေကတော့…